Ny alika alika tsara indrindra: tena ilaina amin'ny biby fiompinao | Tontolo alika
Rehefa mieritreritra kojakoja na kojakoja ho an'ny biby fiompy isika, dia tonga ao an-tsaina ireo hevitra tsy manam-petra. Saingy amin'ity tranga ity dia tavela miaraka amin'ny alika teher satria misy tombony be dia be noho ireo volom-borona eto amintsika ary eo amin'izy ireo ny fahafinaretana tsara nefa tsy manaikitra zavatra hafa na fanaka hafa ao an-trano.
Fa raha te hisafidy alika alika tsara ianao dia tsy tokony halahelo izay rehetra manaraka satria ho hitanao ireo safidy samihafa amin'ny resaka famaranana, tombontsoa ary na dia ahoana no ahafahanao manao teather an-trano. Izany rehetra izany sy ny maro hafa dia miandry anao hahafahanao manampy ny biby fiompinao foana!
1 Karazan-tsako alika
1.4 Ny fiofanana
2 Fa maninona ny alika kely no mila teiter?
3 Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny manaikitra amin'ny nifin'ny alika olon-dehibe?
4 Rahoviana no hanova ny teather ho an'ny hafa?
5 Inona no tokony hotadiavintsika mba tsy haharitra 5 minitra ho an'ny alika ny manaikitra
6 Fomba fanaovana amboa alika namboarina amin'ny lamba frantsay
7 Aiza no hividianana manaikitra alika mora vidy
KONG - Peratra - Kilalao...
Izy ireo dia iray amin'ireo mpivarotra lehibe indrindra. SATRIA ny teethers Kong Afaka mahita azy ireo amin'ny famaranana isan-karazany isika ary koa amin'ny loko samihafa. Satria ny tsirairay amin'izy ireo dia haseho mandritra ny taona iray. Koa satria ny ambaratonga samihafa amin'ny fianan'ny biby dia mitaky izany. Amin'ny lafiny iray, kilalao izy io fa amin'ny lafiny iray dia ilay namanao vaovao ihany koa izay mpivarotra sakafo sy fiofanana izay hanome anao vokatra tsara.
Dog Chew 25 ...
Matetika ny rag teher dia antsoina amin'ilay antsoina hoe 'lamba frantsay'. Midika izany fa miresaka momba ny lamba mahatohitra izay ahafahanao miasa miaraka amin'ny lalao ianao na mitaona fiofanana miaraka amin'ilay alika. Satria ampiasain'ny mpanazatra imbetsaka izy io satria io dia fomba tonga lafatra hanamafisana ny hozatrao. Izy io dia hahafahanao manaikitra azo antoka kokoa ary azonao atao ny mamoaka ny fihenjanana isan-karazany amin'izany.
ARQUIVET Cotton knot...
Izy io dia fitaovana iray hafa izay hita ihany koa amin'ireo kojakoja ireo. Ankoatr'izay dia manonona ny anarany izy ireo satria vita amin'ny tady, indraindray atambatra amin'ny loko. Fa eny, dia tsy maintsy misy famaranana voajanahary satria araka ny fantatsika tsara dia handany fotoana be ny volontsika. Ho fanampin'izay, ireo izay manana kofehy vita amin'ny kofehy dia ho mahatohitra kokoa hatrany mba hahatonga ny lalao haharitra ela kokoa.
Tsarovy izany amin'ny tranga maro dia tsy heverina ho kilalao ny teethers. Noho io antony io dia manana ihany koa isika ho an'ny fiofanana, toy ny vita amin'ny lamba na lamba frantsay ary koa ireo vita amin'ny jute. Fa marina fa hanana endrika sy loko tsy manam-petra koa isika, izay hanomezana fampiononana bebe kokoa ho an'ny karazana biby sy tanjona mitovy hatrany: Mba hahafahana mampiofana azy ireo amin'ny fomba marina.
Marika Amazon - Umi -...
Ny hoops koa dia iray amin'ireo volavolan-dehilahy tsara ho an'ny alika izany. Ankoatra ny fotoana mahafinaritra miaraka amin'izy ireo dia afaka mikarakara ny nifiny sy miala sasatra amin'ny refy mitovy ihany koa izy ireo. Amin'ity tranga ity dia mazàna vita amin'ny fingotra izy ireo ary indraindray misy famaranana somary henjana mba hahomby kokoa amin'ny fanadiovana am-bava ary toa ny fihazonana rehefa mitady izany.
Na dia niresaka lamba frantsay aza izahay taloha, dia sisa tavela miaraka amin'ny ondana ankehitriny. Satria fomba lavorary izany lafatra ny manaikitra amin'ny alika tanora fa amin'ny olon-dehibe koa. Izany dia noho ny zava-misy fa ny tsiranoka teether dia manana fonosana feno sentetika sy elastika lehibe. Matetika izy ireo dia manana tahony maro hahafahana mitazona azy ireo amin'ny lafiny samihafa ary miasa ny manaikitra amin'ny fomba matihanina kokoa.
Andriana - taolana voatetika ...
Angamba ny iray amin'ireo endrika manintona indrindra ho an'ny alika dia ny atody ao anaty kongona. Noho izany, tsy afaka teo koa izy ireo. Noho izany Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny famaranana samihafa avy amin'ireo vita amin'ny fingotra malefaka ka hatrany amin'ireo izay mampiditra nylon toy ny lamba tena tianao. Ny fahamendrehan'ny famenon-tsakafo toy izany dia mampitony ny siligaoma ary mitsabo olana am-bava maro, indrindra amin'ny fahatanorana.
Fa maninona ny alika kely no mila teiter?
Satria zanak'alika izy ireo, dia mazoto manaikitra ny zavatra hitany, satria azo antoka fa raha mitondra azy ireo ny tananao dia hanandrana milalao amin'izy ireo koa izy ireo. Ho azy ireo dia fomba iray hahitana zavatra sy toe-javatra vaovao, noho izany dia ho mora amin'ny tetera ny hampidirina ao aminy hatramin'ny volana voalohany amin'ny fiainana.
Mila alika ny alikakely vao manomboka mamoaka fihenjanana sy fihenjanana amin'ny dingana voalohany amin'ny fiainana. Fa koa, mba hialana amin'ny tsy fahazoana aina izay miseho amin'ny siligaoma. Ny nify dia mety hiteraka olana, araka ny fantatsika tsara, ary ilaina hamafisina haingana araka izay azo atao ity faritra ity. Amin'izany dia milalao sy mikarakara ny fahasalamany amin'ny faritra mitovy izy ireo.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny manaikitra amin'ny nifin'ny alika olon-dehibe?
Na dia amin'ny taona voalohany amin'ny fiainana aza dia ilaina ny manaikitra hanafoanana ny tsy fahasahiranana, amin'ny taonan'ny alika dia hampiasa azy io amin'ny teboka mitovy amin'izany isika, satria ny vanim-potoana iray dia tsy dia mitovy amin'ny iray hafa, araka ny hitantsika:
Hanamafisana ny valanoranony. Ny manaikitra dia iray amin'ireo fihetsika lehibe indrindra ary toy izany koa amin'ny fahasalaman'ny vava.
Karakarao ny siligaoma: Ny fahasosorana dia mety ho simba amin'ny alàlan'ny olana am-bava izay hotononintsika ankehitriny. Ny Tartar na ny takelaka dia mety hiteraka bakteria be dia be hangonina ary hahatratra ny atin'ny siligaoma. Azontsika atao foana ny misoroka izany amin'ny fihetsika tsotra toy ny fampiasana ny teether.
Hanala ny fanaintainan'ny vava izany. Koa satria miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana ny aretina sasany dia mety hiseho toy izany koa. Ny sisa tavela amin'ny sakafo dia hanjavona amin'ny fomba tsotra kokoa ary hisorohana ny fanangonana tartar.
Tsy manadino izany koa hanamafy ny hozatry ny hatoka ary na ny ampahany amin'ny lamosina aza raha ampiasaintsika tsara izy ireo.
Manatsara ny fahaizana mitazona zavatra amin'ny vava.
Rahoviana no hanova ny teather ho an'ny hafa?
Ny marina dia, araka ny efa nolazainay, ny safidy eo anelanelan'ny biters dia somary malalaka. Samy amin'ny habe, vita na lamba ary fitaovana. Noho izany dia tsy afaka mividy mividy isika. Raha efa manana ny alika ny alikao, oviana no tokony hanovantsika azy ho vaovao?
Rehefa manomboka amin'ny alika alika alika amin'ny taona antonony na olon-dehibe sy zokiny. Azo antoka fa tsy te hankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao ianao ary tsy hanova ny kojakojanao. Eny, izany ihany no mitranga amin'izy ireo. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia miova ny filan'izy ireo, amin'ny ankapobeny ary tsy maintsy ampifanarahintsika amin'izany ny teethers.
Rehefa tonta ny fitaovana: Amin'ny mariky ny akanjo voalohany, dia miharihary fa mila akanjo vaovao izy ireo. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria mety handratra ny tenany izy ireo, miankina amin'ny karazana akanjo sy rovidrovitra eo amin'ilay teeter mihitsy.
Rehefa tsy miraharaha azy intsony ilay alika: Ity dia iray amin'ireo fotoan-dehibe. Noho izany dia tsy tokony hividy maromaro isika amin'ny fotoana iray ka hanome azy rehetra, satria raha reraka izy ireo dia ho lany ny tahiry. Betsaka ny alika niteraka azy ireo tamin'ny fiovana voalohany, noho izany dia ilaintsika izy ireo manana endrika na famaranana manaitra mba hanitarana ny fiainana ilaina amin'ny kilalao.
Inona no tokony hotadiavintsika mba tsy haharitra 5 minitra ho an'ny alika ny manaikitra
Amin'ny taonan'ny biby fiompinay sy ny karazana biby: Izany dia satria ny teeet dia tsy maintsy manaraka ireo toetra ireo foana. Satria raha alika be io dia omentsika solomaso malefaka be izy dia fantatrao fa ao anatin'ny 5 minitra dia tsy hisy soritr'ilay kilalao intsony. Aza atolotra ny kilalao ho an'ny alika kely ary manomboka amin'ny 7 volana na mihoatra dia afaka misafidy kilalao sarotra kokoa ianao.
Ao amin'ny fitaovana: Ny plastika dia mety ho safidy tsara, saingy marina fa miankina amin'ny karazana hanaikitra sy ny alika, izy ireo no ho tonta voalohany. Ianao koa dia manana fitaovana hafa toy ny nylon na tady.
Ny tanjanao: Tokony hojerentsika tsara alohan'ny hividianana azy. Satria araka ny efa noresahintsika teo dia hiankina amin'ny karazana alika hatrany izany. Isaky ny teethers nofidinao dia ho faritana foana ny taona voatondro. Mila azy ireo mahatohitra isika satria raha mora vaky izy ireo dia mety atelin'ny biby ny sombin-javatra iray.
Amin'ny habeny: Mandeha implicité kely noho ny zavatra rehetra noresahintsika teo aloha. Fa marina fa ny manaikitra dia tsy maintsy mandeha araka ny vavan'ny alika. Satria raha kely ny kilalao dia mety ho voatelina alika lehibe kokoa izany.
Fomba fanaovana amboa alika namboarina amin'ny lamba frantsay
Voalohany dia tsy maintsy mahazo ny lamba frantsay ianao. Satria izy io dia iray amin'ireo lamba mateza sy maharitra indrindra izay hanana ny tanjon'ny teher ao an-trano. Ity lamba ity dia vita amin'ny landihazo sy ny nylon.
Rehefa manana ny lamba ianao dia izao no fotoana tapaho ny lamba ary ny refinao dia 30 santimetatra ny halavany amin'ny 7 santimetatra ny sakany.
Ao anatiny no hametrahantsika fitaovana synthetic sy a volon'ondry mifangaro. Na dia fantatra koa amin'ny hoe Fleece. Marina anefa fa tsy mora ny mahita azy indraindray.
Rehefa nofenoinay izany, tonga ny fotoana hanidiana ny seams. Ataovy marindrano aloha, avelao hisokatra ny sisiny roa. Satria ho any amin'izay alehan'ny tady.
Raha efa manana ilay zaitra voalaza ianao dia tonga ny fotoana apetraho ny tahony roa, ny iray amin'ny lafiny roa. Tsy maintsy malefaka izy ireo fa mafy hatoka miaraka. Ny amplitude, ny mampifanaraka anao amin'ny tananao ary azonao aforeto ao anatiny tanteraka izany.
Izao no fotoana hampidirana tadiny roa, iray isaky ny faran'ny ary akatony amin'ny zaitra mahery. Mba hiantohana izany dia tsara indrindra misafidy kofehy matevina. Fantatsika koa fa hanana faharetana lehibe kokoa izy io.
Azonao atao ihany koa ny misafidy lamba frantsay lava kokoa ary fangejana fotsiny amin'ny lafiny iray. Namboarina tamin'ny nylon izy io ary hamboarina amin'ny zaitra roa sosona mba ho azo antoka fa ho mateza kokoa koa io mitsako alika io.
Aiza no hividianana manaikitra alika mora vidy
Lalao Buddy Wild ho an'ny ...
BOW CALICO teather ...
kiwiko: Ao amin'ity magazay ity, ny alika alika dia iray amin'ireo kilalao be mpividy indrindra. Samy vita amin'ny tady sy amin'ny loko isan-karazany sy hoop na miendrika taolana, nefa tsy manadino ny safidin'ny baolina izay iray amin'ireo fialamboly lehibe ho an'ny alikantsika.
Amazon: Ao Amazon dia afaka mahita ny zavatra rehetra eritreretinao ianao. Ka ny alika manaikitra indray dia tsy ho tavela any aoriana. Ny loko sy ny fomba na ny fitaovana rehetra dia miara-mivondrona ihany koa, saingy miaraka amin'ny tanjona hikarakarana sy hampiala voly, satria samy manana fitaovana azo antoka ho an'ny biby fiompintsika avokoa izy rehetra.
Fivarotana biby: Ny taolana sy ny peratra dia roa amin'ireo safidy izay miavaka amin'ny mpivarotra Tienda Animal fa marina fa ny manaikitra alika dia betsaka kokoa ary manana safidin-kevitra famoronana tokony ho fantatry ny biby fiompinao faran'izay haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Dog teether